ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်နည်း(၁၀)နည်း - For Her Myanmar
Copyright © 2017 For Her Myanmar, All rights Reserved. ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်နည်း(၁၀)နည်း	0
ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်နည်း(၁၀)နည်း	1 month ago by editor
ပျိုပျိုမေတို့ အိမ်ထောင်ရက်သားကျပြီး ကိုယ်လေးလက်ဝန်ရှိလာပြီဆို ကိုယ့်ဆီမှာ ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အနေအထားတွေ ကြုံတတ်ကြပါတယ်။ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဆို အစားစားနေရင်း အော့အန်… ပြီးရင် ပြက္ခဒိန်လေးပြေးကြည့်ပြီး မင်းသမီးက ရာသီလာတဲ့ရက်ကို တွက်ချက်ကြတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါအပြင်တခြားလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့…ကိုယ်လက်မအီမသာဖြစ်တာ၊ ရင်သားနာကျင်နေတာ၊ ဝမ်းဗိုက်တစ်ဝိုက်ကိုက်ခဲတာ၊ ချင်ခြင်းတပ်တာ၊ အသက်ရှူကြပ်တာ၊ ဆီးခဏခဏသွားတာ၊ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲနေတာကြောင့် စိတ်ရှုပ်လွယ်တာ၊ မူးဝေခေါင်းကိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလက္ခဏာမျိုးတွေက သန္ဓေရှိပြီး ၅ပတ်၆ပတ်ကျော်မှ သိရတတ်တာပါ။ တစ်ခါတစ်လေလည်းဒီထက်ပိုကြာတော့မှ သိရတတ်ပါတယ်။ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ ခေါင်းစဉ်က ခေတ်အဆက်ဆက်ကိုယ်ဝန်စစ်ဆေးနည်းဆိုပေမယ့် ဗဟုသုတရအောင် ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာလေးတွေ အရင်ဖော်ပြတာပါ။ ကဲ…အခုစပါပြီ…. နည်းလမ်းလေးတွေ….
ရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ကွယ်..1350 BCE လောက်တုန်းကပေါ့ အီဂျစ်တွေအသုံးပြုခဲ့တဲ့နည်းလမ်းက ဂျုံစေ့နဲ့ဘာလီစေ့ပေါ်ဆီးသွန်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစမ်းသပ်ကြပါတယ်တဲ့။ ရက်အတော်အတန်ကြာတဲ့အခါ ဂျုံစေ့က အညှောင့်ပေါက်လာရင် ကိုယ်ဝန်ဟာမိန်းကလေးဖြစ်ပြီး ဘာလီစေ့က အညှောင့်ပေါက်ရင်တော့ ယောကျာ်းလေးလို့ ခန့်မှန်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အကယ်၍ ဘယ်အရာမှ အညှောက့်မပေါက်လာရင်တော့ ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလို့ ယူဆကြတယ်။ ဒီစစ်ဆေးချက်မှန်မမှန်ကို ၁၉၆၃ခုနှစ်က အမျိုးသားတွေ၊ကိုယ်ဝန်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆီးနဲ့ ကိုယ်ဝန်သည်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဆီးကို စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အခါ စမ်းသပ်မှုရဲ့ ၇၀% မှန်ကန်နေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်တဲ့။
ဘာလီ၊ဂျုံစေ့တွေနဲ့စမ်းသပ်နေချိန်မှာပဲ အီဂျစ်နဲ့ ဂရိတွေ ရဲ့ခန္ဓာဗေဒပေါ် မှုန်ဝါးဝါးတွေးဆ ထင်မြင်မှုတစ်ခုကြောင့် နောက်ထပ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နည်းလမ်းကတော့ ကြက်သွန် ဒါမှမဟုတ် အနံ့ပြင်းတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တစ်ခုခုကို မိန်းမကိုယ်အတွင်းထဲထည့်ပြီးညသိပ်တဲ့နည်းလမ်းပါပဲ။ မနက်လင်းလို့ ခံတွင်းနံ့ဟာ ကြက်သွန်နံ့ထွက်နေရင် ကိုယ်ဝန်မရှိဘူးလို့ယူဆပြီး ကြက်သွန်နံ့မထွက်ရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ရှိပါတယ်တဲ့ရှင်။ ဘာလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ရသလဲဆိုတော့ သန္ဓေသားမရှိရင်သားအိမ်ဟာပွင့်နေတော့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ လှိုင်ခေါင်းလိုဖြစ်နေပြီး ခံတွင်းမှာ ကြက်သွန်နံ့ထွက်စေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အခါမှာတော့ သားအိမ်ပိတ်နေလို့ အနံ့မထွက်ဘူးလို့ ယူဆခဲ့ဖူးကြပါတယ်။
(၁၅)ရာစုနှစ်လောက်မှာရေးသားထားတဲ့ အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ခေတ်အဆက်ဆက်ဆေးကုထုံးစာအုပ်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတဲ့နည်းလမ်းကတော့ အရမ်းကိုထူးဆန်းပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိ သိချင်ရင် ဘေဇင်ပေါ်မှာဆီးသွန်ထားပြီး အဲ့ဒီဆီးထဲ တံခါးချက် ဒါမှမဟုတ် သော့တံကိုထည့်ထားလိုက်ပါ။ (၃)နာရီ၊ (၄) နာရီလောက်ကြာရင် ဘေဇင်ပေါ်ကဆီးရော တံခါးချက်ရောဖယ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ရှိနေတယ်ဆိုရင် တံခါးချက်ရာကျန်နေလိမ့်မယ်လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
တံခါးချက်စမ်းသပ်နည်းက ယုတ္တိမတန်သော်ငြားလည်း ကိုယ်ဝန်သည်တွေရဲ့ဆီးဟာ တခြားသူတွေနဲ့မတူဘူးဆိုတာတော့ လေ့လာမိခဲ့ကြပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့် (၁၆)ရာစုနှစ်မှာတော့ ဆီးပါရဂူနည်းလမ်းကို အသိအမှတ်ပြုလက်ခံခဲ့ကြပါတယ်။ ဆီးပါရဂူတွေဟာ ဆီးအရောင်နဲ့ဆီးလက္ခဏာရပ်တွေကြည့်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိပြောနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့က ဆီးကိုဝိုင်နဲ့ရောစပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆို ဆီးဟာ ဝိုင်နဲ့ရောစပ်သွားပြီးတစ်သားတည်းဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဆီးပါရဂူတွေဟာ…ဆီးကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိသာမက… လူတစ်ယောက်နေကောင်းမကောင်းပါစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။
(၁၆)ရာစုမှာပဲ သမားတော် Jacques Guillemeau ဖော်ပြထားတာကတော့ ကိုယ်ဝန်သည်ဟုတ်မဟုတ်ကို မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးပြောနိုင်ပါတယ်တဲ့။ မျက်စိပညာကျမ်းကို ရေးသားထားတဲ့ ထိုခေတ်အခါက သြဇာတိကမ္မကြီးမားတဲ့Guillemeauဟာ “ကိုယ်ဝန်ဒုတိယလလောက်မှာဆို ကိုယ်ဝန်သည်ရဲ့မျက်လုံးမှာ အရောင်ရင့်နေပြီး သူငယ်အိမ်သေးငယ်သွားပါတယ်။ မျက်ခွံဟာညွတ်ကျနေပြီး မျက်လုံးထောင့်က သွေးကြောများလည်းရောင်နေတတ်ပါတယ်။” လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအပြည့်အဝမှန်တဲ့အရာတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူမှန်တဲ့တစ်ချက်ကတော့ ကိုယ်ဝန်ရှိနေချိန်မှာ အမြင်အာရုံကို ထိခိုက်စေတဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုး မျက်လုံးမှာ ဖြစ်ပေါ်နေတာပါပဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မျက်ကပ်မှန်အသစ်ပြောင်းတပ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အစောပိုင်းအချိန် (၆)ပတ်မှ (၈) ပတ်ဝန်းကျင်နားမှာ သားအိမ်လည်တိုင်နဲ့မိန်းမကိုယ်နှုတ်ခမ်းစပ်၊မိန်မကိုယ်တစ်ဝိုက်ဟာ နက်ပြာရောင်၊ခရမ်းနီရောင်ပြောင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကို (၁၈၃၆)ခုနှစ် ပြင်သစ်သမားတော် James Read Chadwick ကတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဲ့လက္ခဏာရပ်ကို Chadwick လက္ခဏာလို့ခေါ်တွင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေလည်း တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်လက်တွေ့အသုံးချစစ်ဆေးစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်(၁၉)ရာစုအစောပိုင်းကကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ ကိုယ်ဝန်ရှိမရှိကို မိန်းမကိုယ်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခံခဲ့ကြရတဲ့သူတွေများပါတယ်။
(၁၉၂၀) ဝန်းကျင်မှာတော့ ဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Selmar Aschheim နဲ့ Benard Zondek တို့စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာတော့ သားအ်ိမ်ကြီးထွားလာတယ်ဆိုတာ သားအိမ်ကြီးထွားစေတဲ့ဟော်မုန်းတစ်ခုတော့ရှိရမယ်ဆိုတာပါပဲ။အခုလက်ရှိ HCG လို့ခေါ်နေတဲ့ Human Chorionic Gonadortropin ပါပဲ။ သူတို့ဟာ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဖွံဖြိုးသေးတဲ့ သွေးနွေးသတ္တဝါ ယုန်၊ကြွက်စတာတွေကို HCG ဟော်မုန်းထိုးပြီး သားအိမ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို စမ်းသပ်ကြည့်ခဲ့ကြရာက အောင်မြင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကိုယ်ဝန်စစ်ဆေးချင်ရင် ယုန်တွေကြွက်တွေမှာ စစ်ဆေးမယ့်သူရဲ့ဆီးကို ထိုးကြည့်ပြီး (၅) ရက်ကြာတဲ့အခါ ထိုးထားတဲ့ယုန်(သို့) ကြွက်ကိုဗိုက်ခွဲပြီးစမ်းသပ်ခဲ့ပါတယ်။ (၅)ရက်ထပ်စောချင်ရင်တော့ အကောင်ရေများများကို အသုံးချပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
နှစ်(၂၀)ကျော်အကြာ (၁၉၄၀)ခုနှစ် မှာ သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာ ယုန်ထက်မြန်ဆန်တဲ့ဖားနဲ့စမ်းသပ်တဲ့နည်းလမ်းကို ရှာတွေ့ခဲပါတယ်။ဖားတစ်ကောင်ကို ကိုယ်ဝန်စစ်ဆေးမယ့် အမျိုးသမီးရဲ့ဆီးကိုထိုးသွင်းလိုက်ပြီး (၂၄)နာရီကြာတဲ့အခါမှာ အဲ့ဒီဖားရဲ့သားအိမ်ကိုခွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဥတွေကိုတွေ့ရရင် ကိုယ်ဝန်ရှိတ်ာလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။
ယုန်တွေဖားတွေ အသက်ပေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ထိုးဆေးအရင်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းကိုယ်ဝန်စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာ သောက်ဆေး ပါပေါ်လာပါတယ်။ Primodos၊ Duogynon ဆိုတဲ့ ဆေးမျိုးတွေနဲ့စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။ သူ့မှာသောက်ဆေးရော ထိုးဆေးရောမှာ ဆေးပမာဏ(၂)လုံးစီပါပါတယ်။ ထိုးဆေး (၂)လုံးထိုးရတာပါ။ ပထမတစ်လုံးထိုးအပြီး (၂၄)နာရီအကြာ ဒုတိယတစ်လုံးထိုးရပါတယ်။ ထိုးပြီး (၇)ရက်ကျော် (၁၀) ရက်အကြာမှာဆေးအာနိသင်နဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ ဓမ္မတာလာအောင်ပြုလုပ်လိုက်တာပါ။ ကိုယ်ဝန်မရှိမှသာ ဓမ္မတာလာတာပါ။ သောက်ဆေးဆိုရင်လည်း ဒီအတိုင်းပါပဲ။ပထမ(၁)လုံးစားပြီး (၂၄)နာရီအတွင်း နောက်(၁)လုံးထပ်စား၊ (၁၀) ရက်အတွင်း ဓမ္မတာလာမလာကိုကြည့်ပြီးကိုယ်ဝန်ရှိမရှိစမ်းသပ်ရတာပါ။ ဓမ္မတာလာရင် ကိုယ်ဝန်မရှိပါ။
(၁၀) ဆီးစစ်ပစ္စည်း ဖြင့်စမ်းသပ်နည်း
ဒါတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီးတဲ့သကာလ(၁၉၆၀) မှာတော့အရမ်းကို ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့နည်းလမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ဆီးစစ်ကြိယာပစ္စည်းပါ။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ နည်းပညာမြင့်မားလာတာနဲ့အမျှ (၁) ရက်လည်းစောင့်စရာမလို (၁) နာရီလည်းစောင့်စရာမလိုဘဲ မိနစ်ပိုင်း (၅)မိနစ် (၁၀) မိနစ်အတွင်းတိကျတဲ့အဖြေတစ်ခုကိုရမှာပါ။ အသုံးပြုပုံကလည်း ရိုးရှင်းလှပါတယ်။ မနက်ပိုင်းအစောဆုံးဆီးကိုယူပြီး ဆီးစစ်ပစ္စည်းကို ခွက်ထဲနှစ် စမ်းသပ်ရုံနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သတိထားရမယ့်အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။ စိတ်ရောဂါနဲ့ပက်သက်တဲ့ဆေးဝါးတွေသုံးဆွဲထားရင်၊ လုပ်ဆောင်နည်းမှားနေရင်၊ဆီးစစ်ပစ္စည်းရက်လွန်နေရင်၊နောက် (၃၀ဒီဂရီ)ထက်ပိုတဲ့နေရာမှာထားထားမိရင်၊ အဖြေမှန်ကန်မှုမရှိတတ်ပါဘူး။နောက်ဓမ္မတာရက်နဲ့ကပ်ရပ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာဆို ကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အခါထွက်တဲ့ဟော်မုန်း HCG level နိမ့်နေတဲ့အတွက် အဖြေမှန်မထွက်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခါတစ်လေမှာ…မီးယပ်ရောဂါကြောင့် အဖြေမှာ အဖြူရစ်နှစ်ကြောင်းပေါ်ပြီးကိုယ်ဝန်ရှိတဲ့အဖြေမျိုးလည်းပေါ်ထွက်တတ်ပါတယ်။ သို့သော်…ဒီကြိယာဟာ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်းမှန်ကန်မှုရှိတယ်လို့ဆိုထားကြပါတယ်။
ကိုးကား-mental floss, pregnancytestkit
အရိုးပွရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့ ခရမ်းချဉ်သီးဖျော်ရည်သောက်ကြစို့